ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အားကစားဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်သူများက စစ်သုံ့ပန်းဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် စစ်ပွဲကာလ စစ်မှုထမ်းဖြစ်သူများက စစ်ယူနီဖောင်း မဝတ်ဆင်ခြင်း၏ စစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ချိုးဖောက်မှု။ – H2Oupdatenews
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အားကစားဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်သူများက စစ်သုံ့ပန်းဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် စစ်ပွဲကာလ စစ်မှုထမ်းဖြစ်သူများက စစ်ယူနီဖောင်း မဝတ်ဆင်ခြင်း၏ စစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ချိုးဖောက်မှု။
oungmarine11@outlook.com 16/10/2019	No Comments
လွန်ခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်ဝန်းကျင် နိုင်ငံတကာမီဒီယာအတော်များများတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်ထူးခြားသည်ဟု ဆိုနိုင်သော သတင်းတစ်ရပ်ကို ဖော်ပြကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
သတင်းအကျဉ်းချုပ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ရခိုင်လူမျိုးစုသူပုန်ဟု သံသယရှိသော အားကစားဝတ်စုံဝတ်ဆင်လျှက် ပုံဖျက်ထားသူများက တာဝန်အားလပ်ရက် ခရီးသွားလာသူ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမား ၃၁-ဦးကို ဓါးစာခံ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း အောက်တိုဘာ ၁၃-ရက်နေ့တွင် အာဏာပိုင်များက ပြောကြားသည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာအစိုးရပိုင် Global New Light of Myanmar သတင်းစာအား ကိုးကားလျှက် နိုင်ငံတကာမီဒီယာများက ရေးသားရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်စစ်တွေသို့ ဦးတည်ထွက်ခွာလာသော ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားအား လမ်းခုလတ်တွင် အရပ်ဝတ်လူတစ်ဦးက ရပ်တန့်ရန် တားဆီးခဲ့ကြောင်း၊ ကားရပ်တန့်သွားချိန်တွင် အားကစားဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသူ နောက်ထပ် သူပုန် ၁၈-ဦးတို့က တောအုပ်အတွင်းမှ ပေါ်လာပြီး ခရီးသည်များအား သေနတ်နှင့် ချိန်ရွယ်ကာ ဆင်းခိုင်းကြောင်း၊ ခရီးသည်များနှင့် အတူလိုက်ပါလာသည့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားသဖြင့် သူပုန်တို့အား ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် မိမိတို့တပ်မတော်က ထောင်ပေါင်းများစွာအင်အားဖြင့် လိုက်လံရှင်းလင်းလျှက် ရှိကြောင်း မြန်မာ့တပ်မတော် ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦးက ပြောကြားသည်ဟု ဖော်ပြကြသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်သည် အရပ်သားများအား အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခြင်း နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း ပြုလုပ်လျှက်ရှိကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက စွပ်စွဲလျှက်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း သူပုန်တို့၏ လမ်းဘေးဗုံးထောင်ခြင်းနှင့် ပြန်ပေးဆွဲခြင်းတို့ကို ဦးတည်ရှင်းလင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်က ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
ယခုသတင်းနှင့်အတူ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် တပ်မတော်၏ အရံအင်အားဟု ဆိုသဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျှက်ရှိကြောင်း AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခဆိုသူက အတည်ပြုသည်ဟု ပြည်တွင်းမီဒီယာအချို့၏ မြန်မာဘာသာ ရေးသားချက်များ၌ တွေ့ရှိရသည်။
ဤတွင် ပြည်တွင်းစစ် ရာစုနှစ်ထက်ဝက်ကျော်ပြီဖြစ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်သူ ကျွန်တော်သည် နိုင်ငံတကာမီဒီယာများ၏ ဆိုလိုရင်းကို တည့်တည့်ပြောမှ ရိပ်မိတော့သည်။
စစ်ဖြစ်လျှင် လူသေတတ်သည်။ သို့သော် စစ်ပွဲဟူသည် လူသတ်ပွဲကြီးတော့ မဟုတ်ချေ။ စစ်ပွဲဟူသည် နိုင်ငံရေးနည်းနှင့် ဆောင်ရွက်မရသည့်အခါ နောက်ဆုံး နောက်ဆုံးအဖြေရှာခြင်းဖြစ်သည်ဟု နားလည်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်ခင်းကြသည့်အခါ စစ်ကြေညာခြင်းမှစ၍ စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲသူများ စစ်ယူနီဖောင်း ဝတ်ဆင်ကြရန်အထိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေများ သဘောတူရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးလျှက်ရှိကြသည်။
သို့သော် အကြမ်းဖက်ခြင်း Terror , Terrorism နှင့် ပတ်သက်၍ “ နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာကွန်ဖရင့် “ ဟူ၍ ယနေ့တိုင် မရှိသေးပါ။ မိုင်းထောင်၊ ဗုံးခွဲ၊ ပြန်ပေးဆွဲ၊ ချောင်းမြောင်းလုပ်ကြံခြင်းများသည် သမာရိုးကျစစ်ခင်းနည်းများလည်းဖြစ်၍ အကြမ်းဖက်သမားများလည်း အသုံးပြုသည်။ ကွာခြားသည်မှာ နိုင်ငံတကာလိုက်နာမြဲ စစ်ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပဲ စစ်ပွဲနှင့် မပတ်သက်သူများအား နှိပ်စက်ခြိမ်းခြောက်ရာရောက်သော အင်အားအသုံးပြုခြင်း၊ စစ်မြေပြင်မဟုတ်သည့်နေရာများတွင် တမင်ရည်ရွယ်စစ်ခင်းခြင်း၊ စစ်ပွဲနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် မြို့၊ ကျေးရွာများမှ အရပ်သားအသွင်ယူ လှည့်စား၍ ဗုံးထောင်၊ မိုင်းခွဲခြင်း၊ လူသတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
“ ယူနီဖောင်း “ Uniform ဆိုသည်မှာ una” (one) တစ်ဖွဲ့၊ တစ်သင်းနှင့် “forma” (form ) ပုံသဏ္ဍာန်ဟု အကြမ်းအားဖြင့် ဆိုလိုသည်။ စစ်ဆင်ရေး သို့မဟုတ် ရည်မှန်းချက် အုပ်စုတစ်စု၌ ပါဝင်သူများသည် ရပ်တည်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အမိန့်နာခံမှုတို့၌ မည်သူမည်ဝါများဖြစ်ကြောင်း တံဆိပ်အမှတ်အသားများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အဝတ်အစားအရောင်၊ ဝတ်စုံဒီဇိုင်း၊ ဆံပင်ပုံစံ စသည်ဖြင့် ဖောြ်ပခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်ယူနီဖောင်းဆိုသည်မှာ စစ် သို့မဟုတ် လက်နက်နှင့် ဆက်နွယ်လျှက် မည်သို့သော သီးခြား တာဝန်ယူ-တာဝန်ခံမှုရှိကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသည့် သင်္ကေတဖြစ်သည်ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့က “ Military uniforms and the law of war ”International Review of the Red Cross. RICR Mars IRRC March 2004 Vol. 86 No 853 တွင် TONI PFANNER က ရေးသားထားသည်ကို ဖတ်ရှု့ရသည်။
ထို့ကွောငျ့ ကြေးရှာမြားအတှငျး သို့မဟုတျ အနီးတဈဝှိုကျတှငျ အရပျသားအသှငျယူလြှကျ မိုငျးထောငျခွငျး၊ ခြောငျးမွောငျးပဈခတျခွငျးတို့သညျ စဈပှဲကို အလှနျရှုတျထှေးစပွေီး နောကျဆကျတှဲ အန်တရာယျမြားလှသညျ။ ထိုသို့ဖွဈရပျကွောငျ့ အသကျဘေးမှ လှတျအောငျပွေးရသူ ကြား-မ၊ ကလေးသူငယျနှငျ့ သကျကွီးရှယျအို စဈဘေးရှောငျတို့အတှကျ နဈနာနိုငျပါသညျ။
လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားခြင်းသည် စစ်ဖြစ်နေဆဲကာလမှာပင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းခြင်းစီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြသည့် မွန်မြတ်သော အလုပ်ဖြစ်ပါ၏။ ထိုအခါ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အခွင့်အရေးများ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်တို့ကိုလည်း အဆင့်အတန်းရှိရှိ ထောက်ပြပေးရပါမည်။
နိုင်ငံတကာတွင် စစ်ခင်းရခြင်းမှ ရှောင်လွှဲနိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂကဲ့သို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့် သဘောတူစာချုပ်များ တည်ရှိနေပါသည်။ သို့သော် စစ်မဖြစ်ရဟု တားမရကြောင်း ယနေ့ကမ္ဘာအနှံ့ စစ်ပွဲများက သက်သေပြနေသည်။ စစ်ဖြစ်ရလျှင် စစ်ဥပဒေသများ လိုက်နာကြရန် တိုက်တွန်းယုံသာ တတ်နိုင်သည်။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ တိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျ ၁၃၅-မြိုးရှိ၍ နိုငျငံတောျအား လကျနကျကိုငျဆနျ့ကငြျနသေူ အဖှဲ့အစညျး ၁၀၀ ကြောျရှိနသေညျ။ လကျနကျဖွငျ့ အဖွရှောခွငျးကို ဘယျလိုမှ မထောကျခံနိုငျသောျလညျး ဖှံ့ဖွိုးစ ဆငျးရဲနိုငျငံ၏ တိုငျးရငျးသား သှေးခငြျးတို့၏ ရငျတှငျးခံစားခကြျကို နားလညျနိုငျသညျ။ နိုငျငံတဈနိုငျငံတှငျ ပွညျတှငျးစဈဖွဈစေ ပွညျပစဈဖွဈစေ စဈရိပျ-စဈငှေ့သနျးလာခွငျးသညျလြှငျပငျ သူသူငါငါ အားလုံးပါဝငျသော လူ့အဖှဲ့အစညျးကွီး တဈရပျလုံး၏ အမြိုးသားလုံခွုံရေးကို ခွိမျးခွောကျလာခွငျးသာဖွဈသညျ။ ကောငျးသောလက်ခဏာမဟုတျပါ ။ ကြှနျတောျ တို့နိုငျငံသညျ မီဒီယာဖှံ့ဖွိုးမှု အားနညျးပွီး အထှထှေေ ခတျေနောကျကနြသေညျ။ စဈဘေးရှောငျတို့၏ ဆငျးရဲဒုက်ခကို စာနာခွငျး၊ မသိ နားမလညျသော တိုငျးရငျးသား သှေးခငြျးမြားအား အကာအကှယျပေး၍ စဈပှဲမြား ခြုပျငွိမျးစလေိုလြှငျ လူ့အဖှဲ့အစညျးကွီး၏ အမြိုးသားလုံခွုံရေးကို ရှေးဦးစှာ အခွခေံသငျ့ပါသညျ။ တဈဖကျသပျပွောစကားမြား၊ တာဝနျရှိ ပွောရေးဆို ခှငျ့ရှိသူမဟုတျပဲ ဒီလူကို မေးလြှငျ ဒီအဖွရေ လောကျမှနျး သိသိကွီးနှငျ့ သတငျး နာနာလုပျရေးလြှငျ ယိုသူမရှကျ မွငျသူရှကျရပွီး၊ ကိုယျတိုငျ စဈရာဇဝတျမှု၌ ကွံရာပါမြားဖွဈကွောငျး နိုငျငံတကာမီဒီယာမြားက မီးမောငျးထိုးပွသလို ရှိတော့သညျ။
အောက်တိုဘာ – ၁၆၊ ၂၀၁၉ Channel News Asai., 14 Oct 2019, ” Rakhine rebels abduct dozens after storming Myanmar bus” ကို #HtayOung, #OungMarine ကိုးကား ရေးသားသည်။
Previous Previous post: တူရကီစစ်ရေးကျူးကျော်မှုမှ နိုင်ငံ့အချုပ်အချာအာဏာပိုင်နယ်မြေကို ကာကွယ်ရန် ဆီးရီးယားတပ်မတော် မြောက်ပိုင်းသို့ချီတက်။ ဆုတ်ခွာလာသော အမေရိကန်တပ်များနှင့် လမ်းခုလတ်၌ မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ဆုံ
Next Next post: ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းမှ ဆုတ်ခွာသွားသော အမေရိကန်က ၎င်းတို့စွန့်ပစ်ခဲ့သည့် စစ်စခန်းအား ပြန်လည်ဗုံးကြဲဖျက်ဆီး၊